तस्बिरमा हेर्नुहोस् राराको सुन्दरता – Sajha Bisaunee
वि.सं. २०२० सालमा राजा महेन्द्र रारा तालमा पुग्दा उनले गरेको बयान लेखेको ढुङ्गालाई रारा ताल छेउमा रहेको एक रुखको भेदमा राखिएको छ । राजा रारामा पुग्दा राराको सौन्दर्यमा मन्त्रमुग्ध तथा मोहित भइ सोही छेउमा बसेर लेखे ‘सुन्दरताको भण्डार सारा के खनाया यसै रारामा’ । संसारमा राजा महाराजाहरूको मन कठोर हुन्छ भन्ने हल्ला अझै पनि चलिरहेकै छ ।
उतिखेर राजा महेन्द्र पनि झुक्नका लागि होइन, बहादुरी प्रदर्शन गर्नकै लागि रारा पुगेका थिए होलान् । काठमाडौंबाट घोडा चढेर बिकट मुगुको रारा पुग्नु पछाडी महेन्द्रको खास उद्देश्य थियो, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बदेलको शिकार गर्नु । तर, जब रारा तालको किनारमा महेन्द्रले घोडा रोके, घोडाबाट झरेर धुपीको रुखमुनी रोकिए र राराको निलो पानीमा एकटक हेरिरहे, तब उल्टै राराले शिकार खेल्यो महेन्द्रको मनमा ।
रारा ताल नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल हो । रारा ताल नेपालको कर्णाली अञ्चलको मुगु जिल्लामा पर्दछ । समुन्दी सतहबाट २,९९० मिटर उचाइमा रहेको रारा तालको १०.०८ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । राराको औषत लम्बाइ ५ किलोमिटर, औषत चौडाइ ३ किलो मिटर छ भने गहिराइ १६७ मिटर रहेको छ । राराको बयान सुन्दा र फोटो देख्दा लाग्छ, मान्छे त रारामा ओइरो परेर जान्छन् हो । तर यथार्थ फरक छ ।
रारा प्रायः एक्लै हुन्छ, ठूला–ठूला पहाडहरूको बीचमा । निलो मसी पोखिए जस्तै पानी, पानीको छेबैसम्म सल्ला र धुपीका रुखहरू उभिएका, चारैतिर हराभरा तर पनि सुनसान छ, रारा ।
रारा आउने केही पर्यटकले मात्रै राराको सफा, सुन्दर र निर्मल अनुहार मन मस्तिष्कमा तथा क्यामेरामा कैद गरेर फर्किएका हुन्छन् । विगतका वर्षभन्दा पछिल्ला केही वर्षयता रारामा आउने आन्तरिक पर्यटकहरुको सङ्ख्या केही बढेको छ । मोटरबाटो जोडिए पनि वर्षमा तीन महिनामात्र मोटरबाटो सञ्चालनमा आउने भएपछि सोही सिजनमा आन्तरिक पर्यटकहरु रारा भ्रमणका लागी आउँछन् ।
गन्तव्य भनेपछि स्वीट्जरल्याण्डकै किन कुरा गर्नुप¥यो ? छिमेकी भारतकै नैनी तालमा पर्यटक ओइरिएका देख्दा अचम्म लाग्छ । तर, राराको सामु त नैनी तालको सुन्दरताको बयान नै गर्न मिल्दैन । रारा त कति हो कति सुन्दर । तै पनि नैनी तालको तुलनामा नगन्यमात्रै पर्यटक पुग्छन्, रारामा किन ? जवाफ सहज र सटिक छ, विकट मुगुको सुन्दर राराको प्रचार गर्ने र पर्यटक पु¥याउन पहल गर्ने काम राज्यस्तरबाट भएकै छैन ।
कुन्ती मोक्तानले गाएकी थिइन् ‘हुम्ला जुम्ला मोटर चढी कहिले घुम्ने हो, डुङ्गा चढी रारा ताल कहिले घुम्ने हो ’ । यो गीतले नै मुगुको विकटतालाई उदाङ्गो पार्ने अवस्था नभएको भए पनि सडक सञ्जाल जोडिए पनि सडकको अभावले निकै कष्टपछि मात्र रारामा पुग्न सकिन्छ । तर जब कसैले आफ्नो आँखाले रारा देख्छ तब मानिसले सोचेको स्वर्ग त्यही हो कि भन्ने भान हुन्छ ।
विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई नगन्य मात्रामा आनन्दको प्रत्याभूति गराउन सक्छ राराले । ताल्चा विमानस्थलको निर्माण पूरा भएपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्रिरहेको रारा निकुञ्जका निमित्त प्रमुख मोहनचन्द्र विश्वकर्माको भनाइ रहेको छ । राराको सौन्दर्यमा कुरूप दाग नलागोस् भनेर समितिले प्लाष्टिक, टिनजन्य फोहोरमा नियन्त्रण गरेको छ । एउटा प्लाष्टिक लगेर फोहोर गरेबापत एक सय रूपैयाँ जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने नियम त्यहाँ लागू गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७३ साललाई नेपाल घुमफिर वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । घुमफिर वर्षमा मुगुको रारा पर्यटकहरुका लागि आकर्षक पर्यटकीय स्थल हो ।
प्रकाशित मितिः २९ कार्तिक २०७३, सोमबार १७:३६